Raha te hahita ny fomba voarindra tsara ianao, fanentanana nasionaly no jerena, aza mijery lavitra noho ny fanadihadiana tranga CrowdTwist X Factor. Miaraka amin'ny fahitana mpijery mihoatra ny olona 8.5 tapitrisa, ny Fox's The X Factor dia te-hahita fomba vaovao hisarihana ny mpijery aloha, mandritra sy aorian'ny fampisehoana.
Ny fampielezan-kevitra dia nanosika ny fampidinana ny fampiharana finday amin'ny fampisehoana ary koa ny fampitomboana ny hetsika ara-tsosialy nateraky ny pejiny Facebook sy ny diezy Twitter. Ary farany, te hanome fotoana fampahafantarana fanampiny sy fampiroboroboana premium ho an'ireo seho mpitarika lehibe i Fox toy ny Pepsi, BestBuy ary Verizon.
Ireo mpankafy dia afaka nanavotra ny hevitr'izy ireo tamin'ny valisoa isan-karazany, anisan'izany ny notanisain'ireo olo-malaza tao amin'ny Twitter, avy amin'ny mpitsara ny fandaharana, ny entam-barotra voafetra ary ny elektronika mpanjifa be fangatahana avy amin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ilay fandaharana. Ity programa manavao ity dia nanome an'i Fox fiakarana tsy mbola nisy toa azy tamin'ny fidirana amin'ny mpijery, hetsika faharoa amin'ny fampiasa, fifanakalozana sosialy ary fampidinana finday, ary koa ny lanja fanampiny sy ny fisondrotan'ireo mpanohana isan-karazany ny seho.